HAFT KOMPUTEROWY P&M → Kushambadzira mbatya • Kupfeka mbatya
Professional komputa yakadhirowa
Ziva zvigadzirwa zvedu
Isu tiri kambani yePolish ine tsika, inogadzira uye inogovera
zvipfeko zvepamusoro zvemhando yepamusoro uye nguo dzekushambadzira.
Yako yekusona imba
- yakawanda yakagadzirwa mikana
Tine imba yedu yekusonesa - tinosona chaizvo zvichienderana nezvaunotarisira. Kugona kwedu kugona kunotitendera kuburitsa zviuru zvezvinhu pamwedzi.
zvakagadzirwa zvinhu pamwedzi
uye kuendeswa kumusuwo wako.
Yese mirairo inogadziriswa nekukasira, pamazuva akasarudzika, tobva tatumira ivo neyekutumira kana kune parcel locker kuti vakwanise kusvika iwe nekukurumidza.
P & M - inotungamira yekushongedza yekombuta kamuri
P&M inzvimbo yekuPoland yekusonera inoshanda muRawa Mazowiecka kubvira 1995. Isu tinopa kusona, kucheka, ironing uye kunyora mazita.
Isu tinoridza hunyanzvi hwekushongedza kombiyuta pane yekusimudzira uye yekupfeka.
Yedu kupa inotungamirwa kumakambani nevatengesi vese. Kana iwe uchida kutenga kubva kune chidimbu chimwe, ndapota shanyira zvedu online chitoro.
P & M inogadzirwa nevanhu. Ivo vane hunyanzvi uye vane hunyanzvi hunyanzvi vanozofara kukupa rairo nerubatsiro mukusarudza hwakanakisa dhizaini uye dhizaini kuti zvigadzirwa zvako zvioneke zvakasiyana.
P&M - zvishandiso uye mikana
Imba yeP & M yekusonera ine michina yemazuva ano inobvumidza kusangana kunyangwe zvinotarisirwa zvakanyanya zvevatengi.
Yedu yemuchina park inosanganisira, pakati pevamwe: machina ekuvhara, maviri masingano, rendki, anovharira, binders, pasketing muchina, machira erabha, punching michina, padding michina, matafura esimbi.
Isu takagadzirira kuzadzisa yako odha. Tinokukumbira kuti ubatane.
Paweł Kubiak - muridzi wekambani
Ziva masimba edu
Vashandi vedu vane hunyanzvi vanodzirumbidza makore mazhinji ehunyanzvi, vanofara kubatsira nekupa zano mukugadzira uye kusarudzwa kwemaitiro akanakisisa ekumaka - isu ticha kutora chero kurongeka!
Sangana nekambani yedu
Mazuva ano emuchina paki
Iyo yepamusoro yepamusoro yezvigadzirwa
Yakawanda ruzivo rwekusona
Isu tinofara kugovera ruzivo uye kupa matipi
Pamapeji eblog yedu iwe unowana ruzivo nezve yedu yekupa uye akawanda akakosha matipi ezve maitiro mune yedu indasitiri.
Ona zvimwe zvinyorwa
DTG kupurinda, kutara kubva pachidimbu chimwe
DTG yakanyanyisa - mukana wekudhinda kubva pachidimbu chimwe DTG kudzvinyirira ndiyo imwe yetsva nzira dzekumaka ...
T-shirts ane anodhinda
T-shirts ine anodhinda Yemazuva ano embroidery yekombuta inoshandiswa kushongedza dzakasiyana siyana machira ...
Makambani aivimba nesu